Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Septambra 2020 à 19:05
68 octets ajoutés , il y a 1 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Septambra 2020 à 18:56 (hanova)
Endrika tamin'ity 21 Septambra 2020 à 19:05 ity (hanova) (esory)
=== Ny vondrom-piteny baltobaltô-slava ===
Ny vondrom-[[Fiteny balto-slava|piteny baltobaltô-slava]] dia misampana roa, ka ahitana ireo [[fiteny balta]] sy ireo [[fiteny slava]].
* Fiteny keltika an-tanibe: fiteny gaoloà, fiteny lepontikalepôntika, fiteny keltibera, fiteny galatiana (na galata), fiteny norika,
* Fiteny britônika: fiteny galoà na kimrika, fiteny kornikakôrnika, [[Fiteny bretona|fiteny bretôna]], fiteny kambriana ary fiteny pikta.
Ny vondrom-[[Fiteny indô-iraniana|piteny indô-iraniana]] dia ahitana ireo [[fiteny iraniana]] (na iranika) sy ireo [[Fiteny indo-ariana|fiteny indô-ariana]] ary ny fiteny noristany.
* Fiteny iranika: isan'izy ireo ny fiteny avestika, ny [[fiteny persiana taloha]], ny fiteny iraniana antenantenany, ny [[fiteny persana vaovao]], ny [[fiteny pastô]] (ao Afghanistàna), ny [[fiteny korda]], ny [[fiteny balotsy]], ny fiteny skitiana, ny fiteny sarmatiana ary ny [[fiteny osetaôsetiana]].
Mizara ho sampana telo ny vondrom-[[Fiteny italika|piteny italika]], dia ireo [[fiteny latiniana]] (na [[Fiteny latinolatinô-faliska|latinolatinô-faliska]]) sy ireo [[fiteny ôsko-ômbriana]].
* Fiteny latiniana na latinolatinô-faliska, izay ahitana ny [[fiteny latina]], ny fiteny faliska, ireo [[fiteny rômana]] (fiteny sarda, [[fiteny romaniana]], fiteny dalmatika, [[fiteny italiana]], [[fiteny espaniola|fiteny espaniôla]], [[fiteny ladino|fiteny ladinô]], [[Fiteny portogey|fiteny pôrtogey]], [[fiteny frantsay]], [[fiteny ôksitana]], [[Fiteny katalàna|fiteny katalana]], [[Fiteny romantsa|fiteny rômantsa]], [[fiteny ladîna]], fiteny friôlana), sns.
* Fiteny ôskoôskô-ômbriana, izay ahitana fiteny tsy misy mampiasa intsony, dia ny fiteny ôska sy ny fiteny ômbriana ary ny fiteny maro hafa koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/997309"